बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ किताब कसरी प्रयोग गर्ने?
लेखको भाषा cakchiquel (central) अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अबुइ अब्बे अरबी अलुर अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इबिन्डा इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एडो एफिक एसान एस्टोनियन ओक्पे ओटेटेला ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काबीय काबुभरदियानु किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा खाना गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुजराती गुर्जे गून गोकाना ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टान्ड्रयो टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डायाक ङाजु डिगोर डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस नेपाली नोंगा न्दौ न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (क्यामरून) पेल्ले पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाटाक (सिमालुङ्गुन) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेते बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिजो मिहे मूर मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रोतुमन रोमानियन रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाओशियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लेन्जे लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सङ्गीर सरमक्कन सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोली सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
सिकाउँछ किताब र बाइबलले सिकाउँछ किताब मिल्दोजुल्दो छ। यी दुवै किताबले एउटै सत्यबारे बताउँछ र विषयवस्तुलाई उस्तै क्रममा राखिएको छ। तर सिकाउँछ किताबमा प्रयोग गरिएका शब्द र तर्कहरू अझ सरल छन्‌। बाइबलले सिकाउँछ किताब बुझ्न गाह्रो हुनेहरूका लागि यो किताब तयार पारिएको हो। सिकाउँछ किताबमा अतिरिक्त लेखको सट्टा नोटहरू प्रयोग गरिएको छ। अनुच्छेदमा भएका केही शब्द तथा विचारलाई यी नोटहरूमा सरल तरिकामा व्याख्या गरिएको छ। यस किताबमा परिचय प्रश्न तथा पुनरावृत्ति पेटी छैन। बरु अनुच्छेदहरूमा छलफल गरिएको बाइबल सत्यलाई सारांशमा बताएर समापन गरिएको छ। बाइबलले सिकाउँछ किताबजस्तै सिकाउँछ किताब जहिले पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसको लागि यो किताब प्रस्तुत गर्ने महिना पर्खेर बस्नु पर्दैन। बाइबल अध्ययन सञ्चालन गर्दा सिकाउँछ किताबमा भएका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं?
सारांश: धेरैजसोका लागि बाइबलले सिकाउँछ किताबजस्तै अनुच्छेद पढ्‌दै, प्रश्न सोध्दै बाइबल अध्ययन सञ्चालन गर्नु उपयोगी हुन्छ। तर बाइबल विद्यार्थीलाई भाषाको समस्या छ वा तिनी राम्रोसँग पढ्‌न सक्दैनन्‌ भने सिकाउँछ किताब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यायको सारांश प्रयोग गरेर अध्ययन सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ अनि अनुच्छेदहरूचाहिं विद्यार्थी आफैलाई पढ्‌न प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईंले हरेक बाइबल सत्यलाई १५ मिनेटजतिमै सिकाउन सक्नुहुन्छ। यी सारांशमा अनुच्छेदका कुराहरू विस्तृत रूपमा बताइएको छैन। त्यसैले अध्ययन सञ्चालकले विद्यार्थीको आवश्यकता मनमा राख्दै राम्ररी तयारी गर्नु आवश्यक छ। अनुच्छेदहरू पढेर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भने यी सारांशलाई पुनरावृत्तिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट: नोटमा भएका शब्द तथा विचारहरूलाई अनुच्छेदमा जुन क्रमअनुसार राखिएको थियो, त्यही क्रमअनुसार राखिएको छ। सिकाउँछ किताबमा भएका नोटहरूलाई अध्ययनको दौडान छलफल गर्ने कि नगर्ने भनेर अध्ययन सञ्चालकले निर्णय गर्न सक्छन्‌।